15 हेलोवीन शिल्प एक डराउने समय छ शिल्प मा
15 हेलोवीन शिल्प एक महान समय छ
इसाबेल कातालान | 14/10/2021 18:00 | हेलोवीन शिल्प, बच्चाहरूको लागि शिल्प
हेलोवीन आउँदैछ र यो शैली मा मनाउन को लागी तयार हुने समय हो! कसरी केहि बनाउन को लागी अवसर लिने बारे मा हेलोवीन शिल्प supergirls जसको साथ घर सजाउन र एक रमाईलो समय छ? यस पोष्ट मा हामी केहि सबैभन्दा मूल शिल्प को समीक्षा यी छुट्टिहरु बनाउन को लागी। यो नछुटाउ!
1 ब्याट क्लिप र अन्य विकल्पहरू यस वर्ष हेलोवीन मनाउन
2 एक सजीलो हेलोवीन शिल्प - चुड़ैल doormat मा squashed
3 बोक्सीको झाडू
4 कार्डबोर्डको साथ कालो बिरालो
5 हेलोवीनको लागि चकलेट लपेट्दै
6 हेलोवीनको लागि कालो कार्डबोर्ड आमा
7 बच्चाहरु संग बनाउन हेलोवीन माला
8 दानव प्याक हेलोवीनमा क्यान्डी दिन
9 बच्चाहरूको साथ बनाउन सजिलो हेलोवीन ममी
10 ममीको आकारमा हेलोवीन मैनबत्ती होल्डर
11 हेलोवीनको लागि हास्यास्पद लली स्टिकहरू
12 हेलोवीनका लागि पपकोर्न
13 राम्रो कार्डबोर्ड ब्याट
14 हेलोविनका लागि बिरालो
15 हेलोवीन को लागी सानो चुचुरो टोपी
ब्याट क्लिप र अन्य विकल्पहरू यस वर्ष हेलोवीन मनाउन
हामी यो संग शुरू गर्छौं ब्याट दबाना, एक सरल हेलोवीन शिल्प को छ कि तपाइँ छिटो केहि सामग्रीहरु संग तपाइँ पहिले नै घर मा छ जस्तै काठ का कपडा, कालो मार्कर, कालो गत्ता, कैंची, शिल्प को लागी आँखा र एक सिलिकॉन बन्दूक संग तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ उदाहरण को लागी यो ब्याट क्लिप को उपयोग घर को पर्दा द्वारा झुण्ड्न को लागी, कपडा लाईन मा कपडा झुण्ड्याउन वा नोटबुक सजाउन सक्नुहुन्छ, धेरै अन्य उपयोगहरु को बीचमा। पोस्ट मा ब्याट क्लिप र अन्य विकल्प हेलोवीन मनाउन यस वर्ष तपाइँ तिनीहरूलाई बनाउन को लागी निर्देशन देख्नुहुनेछ।
एक सजीलो हेलोवीन शिल्प - चुड़ैल doormat मा squashed
बोक्सीहरु मध्ये एक सबैभन्दा हेलोवीन पार्टी संग जोडिएको विषयहरु मध्ये एक हो। यही कारणले यो यो सूची बाट हराउन सक्दैन। मँ एक रमाईलो हेलोवीन शिल्प ल्याउँछु कि तपाइँ यो सिजन तयार गर्न सक्नुहुन्छ र जसको साथ तपाइँ तपाइँको पाहुनाहरुलाई आश्चर्य गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ घर मा एक पार्टी मनाउनुहुन्छ। मेरो मतलब यो हास्यास्पद छ कुचल बोक्सीको आकारको डोरमेट, घर मा गर्न को लागी सरल शिल्प मध्ये एक।
तपाइँलाई मात्र एक जोडी जुत्ता र मोजा, ​​कुशन भरण र एक doormat को आवश्यकता पर्नेछ। हेर्न को लागी यो कसरी गरिन्छ म सिफारिश गर्दछु तपाइँ पोस्ट पढ्नुहोस् डच ढोकामा कुचियो जहाँ तपाइँ चरण द्वारा कदम पाउनुहुनेछ।
यो महत्वपूर्ण मिति मनाउन को लागी घर मा हराउन नसकिने अर्को गहना एक बोक्सीको झाडू हो। यदि तपाइँ घर को सजावट को लागी एक फरक स्पर्श दिन चाहानुहुन्छ, मँ सुझाव दिन्छु कि तपाइँ यो पुन: सिर्जना गर्नुहोस् बोक्सीको झाडू जसको लागी तपाइँ धेरै सामग्री को आवश्यकता छैन। वास्तवमा, तपाइँ सबैले गर्नु पर्छ केहि शाखाहरु र केहि रिबन उनीहरुलाई एक साथ बाँध्न को लागी। त्यो सजिलो!
जे होस्, यदि तपाइँ देख्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी विस्तार मा गरिन्छ, मँ तपाइँलाई पोस्ट पढ्न को लागी सल्लाह दिन्छु हेलोवीन मा सजाने को लागी बोक्सी को झाडू.
कार्डबोर्डको साथ कालो बिरालो
बोक्सीहरु को मनपर्ने पाल्तु जनावर या त हेलोवीन शिल्प को यो सूची बाट हराउन सक्दैन। यो एक क्लासिक हो र बच्चाहरु यो राम्रो बनाएर घर को सजावट मा भाग लिन मनपर्छ कालो बिरालो कि उनीहरु आफ्नो कोठा मा राख्न सक्छन्। यो एक पल मा गरिन्छ र यो धेरै सजिलो छ। यसको अतिरिक्त, यो धेरै राम्रो संग झाडू को छेउमा उजागर गरीएको छ कि मँ तपाइँलाई अघिल्लो शिल्प मा देखाउँछु।
सामग्री को रूप मा तपाइँ केहि कालो कार्डबोर्ड र अर्को रंग कि तपाइँ मनपर्छ, शिल्प आँखा, गोंद र कैंची लिनु पर्छ। तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कसरी पोष्ट मा निर्मित छ कार्डबोर्डको साथ कालो बिरालो। तपाइँ यसलाई माया गर्नुहुनेछ!
हेलोवीनको लागि चकलेट लपेट्दै
बच्चाहरु कैंडी र चकलेट मनपर्छ। हेलोवीन एक शानदार समय तपाइँको कल्पना जंगली चलाउन र विषय अनुसार आकार संग कैंडी तयार गर्न को लागी हो। उदाहरण को लागी यो भ्याम्पायर रैपिpping्ग देख्छन् केहि चकलेट प्रस्तुत गर्न। तपाइँ दुबै बच्चाहरु र वयस्कहरु लाई आश्चर्यचकित पार्नुहुनेछ!
यो हेलोवीन शिल्प मध्ये एक हो कि तपाइँ को लागी धेरै सामग्री को आवश्यकता पर्दैन। एक कालो र लाल रंगको गत्ता, शिल्प आँखा, गोंद स्टिक, एक चकलेट पट्टी र कैंची को एक जोडी पर्याप्त हुनेछ। त्यो सजिलो! यदि तपाइँ हेर्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी कदम बाट गरिन्छ, पोष्ट याद नगर्नुहोस् हेलोवीनको लागि चकलेट लपेट्दै.
हेलोवीनको लागि कालो कार्डबोर्ड आमा
हेलोवीन ब्रह्माण्ड को अर्को धेरै विशिष्ट चरित्र ममी हुन्। यदि तपाइँ यस बर्ष को लागी धेरै हेलोवीन शिल्पहरु तैयार गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाइँको सूची बाट हराउन सक्दैन! यो एक हो कालो गत्ता आमा गर्न को लागी धेरै सरल छ र यो गर्न को लागी तपाइँ धेरै सामग्री, केवल एक सानो कालो गत्ता, एक पेन्सिल, एक इरेजर, सेतो ऊन, शिल्प आँखा, गोंद, कैंची र टेप को आवश्यकता पर्दैन।
यदि तपाइँ यस शिल्प को निर्देश मा विस्तार मा जान्न चाहानुहुन्छ, म सिफारिश गर्दछु तपाइँ पोस्ट पढ्नुहोस् हेलोवीन को लागी कालो कार्डबोर्ड ममी।
बच्चाहरु संग बनाउन हेलोवीन माला
यदि तपाइँ हेलोवीन शिल्प को लागी देखीरहनु भएको छ किनकि तपाइँ एक पार्टी फेंकने योजना बनाउनुहुन्छ, यो मालाले तपाइँलाई कोठा सजाउन मद्दत गर्दछ जहाँ तपाइँ यसलाई मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। यो गर्न को लागी धेरै सजिलो छ र बच्चाहरु को लागी भाग लिन र पार्टी को सजावट संग सहयोग गर्न को लागी आदर्श छ।
सामग्री तपाइँ यो तयार गर्न को लागी आवश्यक छ हास्यास्पद माला ती कालो र सुन्तला निर्माण कागज, टेप, पेन्सिल, कैंची, एक इरेजर, र केहि सेतो तार हो। यदि तपाइँ हेर्न को लागी यो कसरी गरिन्छ, पोस्ट मा क्लिक गर्न नहिचकिचाउनुहोस् बच्चाहरु संग बनाउन हेलोवीन माला र त्यहाँ तपाइँ चरण दर चरण विवरण पाउनुहुनेछ।
दानव प्याक हेलोवीनमा क्यान्डी दिन
एक हेलोवीन पार्टी को दौरान साना बच्चाहरु लाई चकित गर्न को लागी अर्को तरीका यो प्यारा सानो राक्षस आकार को प्याकेज बनाउन र कैंडीहरु लाई वितरण गरीरहेको छ। तिनीहरूले यो माया गर्नेछन्! उनीहरु आफैं यसको तयारी मा भाग लिन सक्छन् र उनीहरुलाई पार्टी को दौरान अतिथिहरु को बाकी बचाउन सक्छन्।
यो गर्न राक्षस कैंडी प्याक तपाइँलाई मात्र केहि आपूर्ति को आवश्यकता पर्नेछ: शौचालय कागज रोल, शिल्प आँखा, रंगीन गत्ता, कैंची र एक तातो गोंद बन्दूक बाट एक गत्ता। पत्ता लगाउनुहोस् कि यो पोष्ट मा कसरी गरिन्छ दानव प्याक हेलोवीनमा क्यान्डी दिन.
बच्चाहरूको साथ बनाउन सजिलो हेलोवीन ममी
यो मम्मी हेलोवीन शिल्पहरु मध्ये एक यति सजीलो छ कि बच्चाहरु लाई पनि यो आफ्नै बनाउन सक्छ। उनीहरु यो बनाउन को लागी एक धेरै रमाईलो समय हुनेछ आमा आफ्नो कोठा सजाउन वा घर को कुनै अन्य कुनामा।
यो शिल्प बनाउन को लागी, तपाइँ केहि सामग्रीहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ पहिले नै घर मा अन्य अघिल्ला शिल्पहरु बाट, जस्तै शौचालय कागज को डिब्बा, चल आँखा, सेतो तार को रोल, कैंची, एक पेन्सिल र टेप को एक बिट। हेर्न को लागी यो कसरी गरिन्छ, पोस्ट नछुटाउनुहोस् बच्चाहरूको साथ बनाउन सजिलो हेलोवीन ममी.
घर को कोठा सजाउन र यो एक भूतिया स्पर्श दिन को लागी, तपाइँ यो एक ममी को आकार मा यति ठुलो मोमबत्ती धारक के गर्ने सोच्नुहुन्छ?
यो सबैभन्दा सुन्दर र सरल हेलोवीन शिल्प को एक तयार गर्न को लागी हो। यसको लागि सामग्री को रूप मा मैनबत्ती होल्डर तपाइँ एक गिलास जार, पट्टीहरु, केहि मोमबत्ती, शिल्प आँखा र एक तातो गोंद बन्दूक प्राप्त गर्न को लागी हुनेछ। त्यो सजिलो! यो ममी कसरी बनेको छ हेर्न को लागी, पोस्ट मा एक नजर राख्नुहोस् ममीको आकारमा हेलोवीन मैनबत्ती होल्डर.
हेलोवीनको लागि हास्यास्पद लली स्टिकहरू
यो बच्चाहरु संग तयार गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो हेलोवीन शिल्प मध्ये एक हो। पहिले उनीहरु केहि popsicles र बचेको लाठी संग उनीहरु यो रमाईलो तयार गर्न सक्नुहुन्छ प्यारा राक्षस शिल्प। उनीहरु पक्कै पनी विस्फोट हुनेछन्!
अन्य सामग्री यो शिल्प बनाउन को लागी आँखा, गोंद, कैंची, ईर्ष्या, सेतो तार, रंगीन मार्कर सार्दै छन्। तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो पोष्ट मा कसरी गरीएको छ हेलोवीनको लागि हास्यास्पद लली स्टिकहरू.
हेलोवीनका लागि पपकोर्न
एक क्लासिक कि कुनै पनी हेलोवीन पार्टी मा हराउन सक्दैन को झोला हो थीम्ड पपकर्न। यो एक कंकाल को आकार मा। यो उनीहरुलाई तयार गर्न को लागी धेरै सजीलो छ, यसको लागी तपाइँ केहि पपकर्न, पारदर्शी कागज, प्याकेज टाई गर्न को लागी एक धनुष र खोपडी रंग को लागी एक कालो मार्कर चाहिन्छ।
जे होस्, यदि तपाइँ हेर्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी चरणबद्ध गरीएको छ म तपाइँलाई पोस्ट पढ्न सल्लाह दिन्छु हेलोवीनका लागि पपकोर्न। तपाइँ तिनीहरूलाई एक पल मा तयार पार्नुहुनेछ!
राम्रो कार्डबोर्ड ब्याट
यदि तपाइँ घरमा कार्डबोर्ड कागज रोल को एक जोडा छ र तपाइँ केहि शिल्प बनाउन को लागी उनीहरुको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ, यो राम्रो गत्ता ब्याट यो घर को कोठा सजाउन को लागी एक राम्रो विचार हो। कालो, सेतो, पहेंलो निर्माण कागज, कैंची, गोंद, मार्कर, र एक सानो पाउडर ब्लश प्रयोग गर्नुहोस्। परिणाम महान हुनेछ!
यदि तपाइँ हेर्न को लागी यो कसरी निर्मित छ, पोस्ट मा क्लिक गर्नुहोस् बच्चाहरु संग हेलोवीन मा बनाउन हास्यास्पद ब्याट.
हेलोविनका लागि बिरालो
El कालो बिरालो यो एक जनावर हो कि परम्परागत हेलोवीन संग पहिचान गरीएको छ र यस प्रकार को एक पार्टी को सजावट को लागी खेल को एक धेरै दिन्छ। यदि तपाइँ यी जनावरहरु लाई माया गर्नुहुन्छ, यो एक शिल्प हो जस संग तपाइँ एक राम्रो समय बनाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्न को लागी धेरै गाह्रो छैन तर यो बिल्कुल ध्यान दिन को लागी यो एकदम सही बनाउन को लागी आवश्यक छ।
यो बनाउन को लागी तपाइँ केहि सामाग्री (रंगीन गत्ता, कालो कलम, कम्पास, दुई सेतो पाइप क्लीनर, कैंची, पेन्सिल, कालो मार्कर, आदि) को आवश्यकता हुनेछ तर यो हेलोवीन शिल्पहरु जसको साथ तपाइँसँग सबैभन्दा राम्रो समय हुनेछ। यसको अतिरिक्त, तपाइँ यसलाई घर मा कहीं पनी झुण्ड्याउन सक्नुहुन्छ यो राम्रो र ढोकामा पनी हेर्न को लागी। यदि तपाइँ बाँकी सामग्री र यो बिरालो कसरी कदम बाट कदम बनाईएको छ को एक दृष्टान्त भिडियो हेर्न चाहानुहुन्छ, पोस्ट मा एक नजर लिनुहोस् हेलोविनका लागि बिरालो.
हेलोवीन को लागी सानो चुचुरो टोपी
हेलोवीन मा तपाइँ एक बोक्सी टोपी याद गर्न सक्नुहुन्न! तपाइँ यो सामग्री संग घर मा गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ अन्य अवसरहरु बाट बचाईएको छ र बच्चाहरु लाई विनिर्माण प्रक्रिया मा भाग लिन मनपर्छ किनकि यो शिल्प गर्न को लागी धेरै सरल छ।
यो गर्न बोक्सी टोपी एक भ्यागुतो को अनुहार संग मात्र तपाइँ केहि सामग्री को आवश्यकता हुनेछ: कालो गत्ता, विभिन्न रंगहरु मा फोम, पेन्सिल, कैंची, कम्पास र केहि अन्य चीजहरु। यदि तपाइँ सामग्री र निर्देशन को यो हास्यास्पद बोक्सी टोपी बनाउन को लागी जान्न चाहानुहुन्छ, पोस्ट याद नगर्नुहोस् हेलोवीन को लागी सानो चुचुरो टोपी। यो हेलोवीन शिल्प मध्ये एक हो कि बच्चाहरु लाई धेरै मनपर्नेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » बच्चाहरूको लागि शिल्प » 15 हेलोवीन शिल्प एक महान समय छ